Nyefee Nyefee na Ụmụaka na ndị ọrụ
Dika mkpebi emere na Istanbul metropolitan Municipality Council, ulo akwukwo di elu nke ulo akwukwo, nyocha akwukwo omumu, nzoputa akwukwo ulo akwukwo na ndi mmadu. Nyocha nyocha 1 High School na-enyocha na June, 15 - 16 [More ...]
Istanbul Metropolitan Municipality, emechala maka preparations Ramadan. Dị ka nke a si kwuo, ụgbọ okporo ígwè niile na-ejikọta na IMM ga-ebu Istanbul n'oge ezumike. Na nke mbụ 3 ụbọchị ememe ahụ, okporo ụzọ ugbo ala niile nke İBB enyemaka İSPARK free service [More ...]
Emere Eid na Istanbul na 19 Free Public Transport na May?
Nzukọ nzuko omeiwu, Ramadan Feast na 19 May na Istanbul, a nabatara ụgbọ njem ọha na eze na-aga n'ihu. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Council, Istanbul Metropolitan Municipality Council 1. Onye isi oche Göksel Gümüşdağ gwara ya [More ...]
İBB Council Member CHP Kösedağı: Anyị ga-agbatị okporo ígwè okporo ígwè na obodo dum n'ime njem ọha na eze
CHP Istanbul Metropolitan Municipality Member nke nzuko omeiwu kwupụtara Mesut Kosedagi Assembly ikpo okwu: "IETT nsogbu kpụchasịrị si a atụmatụ nke obstructing nti ndi nke Istanbul ga-eme ka mgbanwe ngwa ngwa dissolving a İETT oge a. Ya mere, na-adịghị, anyị ga-emepụta ihe ngwọta, n'ihi na İmamoğlu [More ...]
Çaycuma State Hospital FunNular 27 na-eburu 14 puku mmadụ 419 mmadụ kwa ụbọchị
Municipality of Çaycuma State Hospital na-enye na-agafe agafe ohere ka Town ebuli ga-mezue ndị na-ewu (funicular) ebe ọ bụ na ụbọchị, ọ banyere ọrụ 14 419 puku na puku ndị mmadụ. Iji mee njem site n'aka Abdullah Kalaycı rue Ụlọ Ọgwụ nke United site Çaycuma Municipality [More ...]
Ewu ewu na Istanbul Ọnọdụ nke usoro okporo ígwè okporo ígwè ugbu a
Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) nke ụlọ ọrụ ụzọ ụgbọ oloko wuru na-aga n'ihu n'ihu gas. Otú ọ dị, na March 31 2019 Nations Alliance si nwa akwukwo na mpaghara ntuli aka dị ka tentetivu pụta nke onyeisi oche Ekrem İmamaoğlu họrọ IMM, otú ọ ga-emetụta ndị na ụzọ ụgbọ oloko na-ewu [More ...]
Urban Okporo ígwè Lines na-eje Ozi Status of ugbo ala na Turkey
Turkey eje ozi ugbu a 12 anyị obodo mepere emepe tren usoro azụmahịa. Na nke a n'ógbè, anyị Istanbul, Ankara, Bursa, Izmir, Konya, Kayseri, Eskişehir, Adana, Gaziantep, Antalya, Samsun na Kocaeli bụ. Dị ka nke oge a na anyị azụmahịa nkeji 3461 ụzọ ụgbọ oloko, LRT, [More ...]
Mgbe ị mepee Ozi nke Rumeli Hisarüstü-Aşiyan
Kedu mgbe a ga-emeghe akara ndụ Rumeli Hisarüstü-Aşiyan site na mkpali nke ụmụ amaala, gịnị bụ nkwụsị, ụzọ na ọdụ ụgbọ? A na-ewu okpu ahụ n'etiti Rumeli Hisarüstü na Asiyan Park na Bosphorus n'ụsọ oké osimiri. Mgbe e mechara ya, ya na M6 njikọta [More ...]
Ulo oru usoro okporo ugbo di na Istanbul
Mbido mbụ gaa n'ụlọ ọgwụ na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ na Çaycuma Hospital
Çaycuma State Hospital Municipality ga-enye na-agafe agafe uzo si funicular Abdullah Kalaycı Street, ọ bụ nke mbụ na òkè nke Mayor Bulent Weigand. Çaycuma Mayor Bülent Kantarcı nkwa na mpaghara ntuli aka na 2014 gụnyere Kent Asansörü (Funicular) [More ...]
Ụgbọ njem na-eji ụgbọ okporo ígwè na-eme njem na IMM's Smart Recycling Container
Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Mevlüt Uysal site Webatara September "Smart Recycling akpa" oru ngo (PITA karama na Mkpọ n'ọnọdụ Istanbul Card iji wụnye sistemụ), ụmụ amaala meriri na ụmụ akwụkwọ nnukwu hit. Mgbasa ozi na mgbasa ozi [More ...]
Gọọmenti na-ele Mkpụrụ ego Metro anya
Ministụ njem na ihe ndị mepere emepe na-ewu ụlọ mpempe ụgbọ okporo ígwè obodo na ọtụtụ obodo, karịsịa na Ankara na Istanbul. Gọọmentị na-agbanwe iwu n'ihi na ọ pụghị ịnakọta ego nke ntinye ego sitere n'aka ndị ọchịchị obodo ahụ. ji [More ...]
Onyeisi nke obodo Istanbul Metropolitan Municipality, Mevlüt Uysal, wepụtara ngwa ngwa Mobile Istanbul ka ọ ghara igbochi oge nkwụsị na ọdụ ụgbọ elu. N'ịkọwa na omume ụlọ na nke mba bụ otu n'ime ihe atụ kachasị mma nke obodo ndị dị ugbu a, Uysal kwuru, sị, "Istanbulite kwesịrị kacha mara mma. anyị ụmụ amaala [More ...]
IETT 22 Belata 50 percent na September
22 ga-enye ọrụ na 50 na Saturday, September 17. Dika ozi ndi sitere na obodo Istanbul metropolitan, 16 na 22 na eme ememe kwa afo n'agbata September na September. [More ...]
IMM ga-Maliyet kwadoro "ego ndị na-agaghị abawanye
Obodo obodo ukwu nke Istanbul kpebiri "ịkwado m ụzọ nke igafe ọha na eze ka ha wee ghara igosi mmụba ọnụahịa na njem ndị ọha na eze na ụmụ amaala. Akuko ahu, nke choro ya na ndi ochichi Uysal choro, kwenyere n'otu aka na nzuko omeiwu IMM. Obodo Istanbul Obodo Ukwu, ọnọdụ akụ na ụba [More ...]